उपकरण र यसको आधारभूत गुणहरू परिचयको साथ सुरू गरौं। साधारण नियममा, गोलाकार सामान्य वार्निश तथा जनशक्तिको लागि जेलको तथाकथित हाइब्रिड हुन्छ। यसको मुख्य प्लस भनेको यो धेरै लामो समयको नाकहरूमा रहन्छ। तिनीहरूको नाकहरू समातेर सजिलो छ, र यसले धेरै समय लिँदैन। नाखूनका साथ खोलका धुलाई पनि समस्या छैन। त्यहाँ उत्पादनमा मानव स्वास्थ्यको लागी कुनै हानिकारक पदार्थ छैन, र यसले एलर्जी वा जलन उत्पन्न गर्दैन।
गोलाकार कसरी लागू गर्ने?
प्रायः, यो उपकरणको मद्दतले मैनीक्योर मैनीक्योर सेलनमा गरिन्छ। त्यसैले यो जेल-वार्निश लागू गर्ने जटिल वा असुविधाजनक प्रविधिको कारण होइन, तर विशेष पराबैंगनी दीपक अन्तर्गत नाखूनमा सुकेको सुकेको कारण। यस्तो चम्किलो खरिद गर्न सकिन्छ, तर प्रायः महिलाहरूले सैलून मैनीक्युरलाई मनपर्छ, नचाहेर आफ्नो समय र ऊर्जा खर्च गर्न चाहँदैनन्। तपाईलाई ख्याल राख्नु आवश्यक छ एक राम्रो, कुशल शिल्पकार को छनौट।
हो, यो सम्भव छ! यदि तपाईं सैलून भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ र घर मैनीक्योर मनपर्छ भने, "घरमा गोलाकार कसरी लागू गर्ने" तत्काल हुन्छ। तपाईलाई यसको लागि आवश्यक छ: आधार कोटिंग "शेलक", जेल-लाक "शैलैक" (तपाइँले रोज्नु भएको रङ), topcoat "Shellac", मेनीक्योर, नेल फाईल र अन्य चीजहरूको लागि अल्ट्राएलेट ल्याट नाखूनहरू। काम गर्नु अघि हात धोएं। काट्टिट हटाउनुहोस् (स्टिकसँग हटाउनुहोस् वा हटाउनुहोस्)। यो पूरै ओभरग्राउन्ड नेल काट्न को लागी यो सल्लाह छ, यो फ्लेक, ब्रेक र यति गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो तरिकाले पकाउने कोष को संरक्षण रोक्न सक्छ। त्यसपछि भान्साको साथ नाकहरू भर्नुहोस् र तिनीहरूलाई एउटा नेल फाईल दिनुहोस्। डिग्री मेट् प्लेट: मेडिकल शराबको कपास ऊन वा कपडामा र यसलाई नाखूनहरू पोष्ट गर्नुहोस्। आधार कोट "शेलक" लिनुहोस् र नाकहरूमा एक तह लागू गर्नुहोस्। तपाईं पराबैंगनी दीपक चालू भएपछि र दस सेकेन्डको लागि आफ्नो हातमा राख्नुभयो। कोटिंग सूखे, र अब यो जेल-लाक आफैलाई लागू गर्न समय हो। एक कोट लागू गर्नुहोस्। यो धेरै पतली हुनु पर्छ, किनकी पराबैंगनी दीपक को प्रभाव को तहत, एक मोटी परत संग लागू वार्निश थोडा झुर्रिएको हुन सक्छ र यति सुंदर नहीं लग रहेको छ। पराबैंगनी दीपक को दुई मिनेट को लागी नाखून मा लागू जेल कील को सूखा राख्नुहोस। त्यसपछि नालहरूमा शैलैक जेलको अर्को तह लागू गर्नुहोस् र फेरि यसलाई ठीक गर्नुहोस्, तपाईंको हात लैंपमा राख्नुहोस्। र सुत्न पछि, पनी तहको साथ अघिल्लो व्यक्तिहरू जस्तै, शीर्ष कोट लागू गर्नुहोस्। एक पराबैंगनी दीपक को तल सूखी। एक कपास पैड संग चिपचिपा परतलाई एकै मेडिकल शराबको साथ चिसो लिनुहोस्। भयो!
गोलाक कसरी हटाउने?
तपाईं यसलाई घरमा गोली मार्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ पहिले नै थाहा छ कि कसरी गोलाकार लागू गर्ने हो, अब हामी कसरी पत्ता लगाउनेछौं कि यसलाई कसरी गोली हान्ने? यो गर्न को लागि, तपाईंलाई गोलाकार, कपास पैड र पन्नी को एक टुकडा हटाउन को लागि एक विशेष हटाने वाला को आवश्यकता हो। रिमभरमा डिस्क गीलो र यसलाई (डिस्क) नेलमा पिक्च गर्नुहोस्, थिच्दै। 5-10 मिनेटको लागि यो पन्नीको साथ कपासको प्याडमा कील लुकाउनुहोस्। प्रक्रिया पछि, pusher ले र नेलबाट पिलिंग जेल वार्निश हटाउनुहोस्, प्लेट हानिकारक बिना।
गोलाकार कसरी लागू गर्ने: फ्रान्सेली
यो गाह्रो छैन। तपाइँ पहिले नै थाहा छ कि कसरी गोलाकार लागू गर्ने, त्यसैले तपाईं घरमा यस्तो जैकेट बनाउन सक्नुहुन्छ! सेतो विधि प्रयोग गरी सट्टा ल्याकसँग सम्पूर्ण टाँस्ने को सट्टा मात्र प्रयोग गर्नुहोस्, केवल नेल को नोक।
कसरी राम्रो तरिकाले नाखून गर्न सरल तरिकाहरू
छोटो नाखूनका लागि ग्रे टोनमा मैनीक्योर
कसरी गुगल (ब्राउजर) द्वारा प्रयोग गर्न
निर्देशन, रेखाचित्र, योजना र समीक्षा: आफ्नो हातमा जामुन उठाएर लागि जोडती
समीक्षा "नातेदार", रेस्टुरेन्ट (चेल्याबिन्स्क, Kirov सडक, 82.) मेनु,
होटल "सूर्योदय" (टर्की) - भूमध्य तट मा एक ठाठ छुट्टी
को बैरल मा विस्तृत नुस्खा नुनीन बनान ककडी